Ihe Nkwupụta Mịnịsta Mịnịsta Ala Eswatini leghaara anya |
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ Njem Eswatini » Ihe nkwuputa Eswatini nke Mịnịsta Ala na-eleghara anya
Ihe nkwuputa Eswatini nke Mịnịsta Ala na-eleghara anya
Obi adịla nro n’Alaeze Africa nke Eswatini. Udo a na-enweta nguzogide. Ọ ga-ewe ọtụtụ ọrụ iji weta ụmụ amaala dị iche iche na gọọmentị n'otu peeji ahụ, mana enweela ọganihu mbụ.
Onye na-arụ ọrụ na Mịnịsta Alaeze nke Alaeze Eswatini gwara ụmụ amaala okwu na nzukọ SADC Troika na July 4
Enweghi ike ịchọta ihe ndị obodo chọrọ na nkwupụta PM ma ọ bụ mmalite mmalite nke mkparịta ụka chọrọ ngwa ngwa n'etiti ndị otu ụmụ amaala na gọọmentị Eswatini
PM dọrọ aka na ntị maka iyi egwu ọzọ gbasara Eswatini: COVID-19
Ndị South African Development Community gara n'Alaeze nke Eswatini ka ha kpọkọta ma gọọmentị ma ụmụ amaala obodo ndị ọzọ iji nye mkparịta ụka mepere anya iji dozie esemokwu na nkwụsi ike nke mba ahụ.
Site na nchịkọta nke udo ndị agha weghachitere, ndị ọrụ ọha ga-alaghachi ọrụ bido na Tuesday. Onye na-arụ ọrụ PM na adreesị nke ndị mmadụ na-agba onye ọ bụla ume ịlaghachi ọrụ ma mara banyere ịgbasa iyi egwu COVID-19.
The Ndi ochichi Eswatini gwara SADC ta na-eji egbe okpu ndị si na South Africa zobatara egbu ndị obodo ya. Egbe ndị a kwuru na gọọmentị si na EFF dị na South Africa ma nye ya nwanne ya nwanyị, EFF nke Swaziland.
Ndị na-alụ ọgụ maka nnwere onwe akụnụba (EEF) bụ South Africa n'aka-ekpe nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị aka-ekpe-African-ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụ onye a chụpụrụ site na mbụ African National Congress Youth League President Julius Malema, na ndị otu ya, na 2013.
Dị ka mmadụ abụọ nwere onwe ha si kwuo eTurboNews ahụrụ, ndị nnupụisi yi yunifọm nke ndị agha Eswatini ka ha hụrụ ka ha na ndị na-eso ụzọ Eswatini na-ebute mbibi, mmerụ ahụ na ọnwụ.
Ndị na-eme ihe nkiri na ụmụ amaala na-ekwu na gọọmentị kwụsịrị inyefe arịrịọ na-akpọ maka mgbanwe ọchịchị onye kwuo uche ya, ọkachasị maka nhoputa onye praịm minista nke eze na-ahọpụtaghị.
N'ajụjụ ọnụ Audrey Brown nke BBC Gbado anya na Africa, Sikhanyiso Dlamini, ada eze na minista mgbasa ozi na teknụzụ, kwuru na ebugharị arịrịọ n'ihi ebili mmiri nke atọ nke Covid-19 na usoro ntinye ntinye nke ọma ewepụtara kama. “A na m ekwu na ndị mbịarambịa ndị mba ọzọ wakporo alaeze ahụ, ndị ndị a goro ha [ndị na-akpọ oku ka e nwee ndozigharị nke ọchịchị onye kwuo uche ha) nwere atụmatụ ndị a They n'uwe ndị uwe ojii na akwa ndị agha, na-abanye ụmụ amaala ma na-ezipụ vidiyo nke onwe ha na-awakpo ụmụ amaala aka ha dị ọcha. Iwu nke ịgba égbè igbu ya esighị n'aka eze ma ọ bụrụ na e nwere iwu dị otú ahụ. ”
Ka ọ dị ugbu a, mgbasa ozi mgbasa ozi na isiokwu na Swaziland News na-egosi oke site na Eswatini ụmụ amaala chọrọ mgbanwe ọchịchị onye kwuo uche ya.
Na Sọnde 4 Julaị 2021, abụọ Ndị na-ede akụkọ ọhụrụ, Ebube Mndebele na Cebelihle Mbuyisa, bụ ndị e kenyere ọrụ na eSwatini ka ndị nchekwa jidere, wakpo ma mekpaa ha ahụ, dị ka tweets site n'akwụkwọ a.
Ndị odeakụkọ New Frame nọ na eSwatini iji kọọ maka ngagharị iwe maka ọchịchị onye kwuo uche ya na mgbado anya steeti igbu ụmụ amaala. Mgbe ha nọ na mba ahụ, a kwụsịrị ha n'ọtụtụ ebe n'ụzọ ọtụtụ oge, yie ha egwu, ma manye ha ihichapụ ihe dị na ekwentị ha na igwefoto ha.
A akwukwo ndi mmadu iri abuo di nkpa, Otu dị iche iche, ụlọ ọrụ nkeonwe dị na Eswatini, nke sitere n'aka ndị nnọchi anya SADC na Gọọmenti ekwupụtabeghị okwu n'okwu onye osote onye isi ala mere tupu taa, July 5.
Onweghi okwu ọ bụla onye isi ala, Eze Eswatini kwuru, Mswati III.
Nke a bụ nkwupụta nke onye Mịnịsta Ala nke Gọọmentị nke Eswatini
Mkpebi anyị gbakọtara ọnụ dịka mba agaghị echefu ebumnobi na-ebugharị ebuli ndụ nke emaSwati niile ma bụrụ nke a na-agaghị ebugharị ebugharị.
N'agbanyeghị ihe ndị mere n'izuụka gara aga bụ nke e jiri ime ihe ike mara, ọkụ ọgbụgba, na ịkwakọrọ ihe n'obodo n'ụzọ a na-enwetụbeghị ụdị ya, anyị na-adị n'otu na-akpọ oku maka udo na nkwụsi ike.
Obi dị anyị ụtọ ụnyaahụ ịnata ngalaba SADC Troika bụ onye nọ na njem nchọta nke eziokwu na oku anyị kpọrọ. Ọrụ nchọta eziokwu a nke SADC ga-aga n'ihu mgbe oge ruru ka anyị na-ekerịta otu ebumnobi mpaghara iji hụ na enwere udo na nkwụsi ike na mpaghara anyị. Ana m arịọ Mba ahụ ka ọ nọrọ jụụ ma nwee ndidi mgbe usoro a na-aga n'ihu.
Dị ka ụmụ amaala obodo a na mpaghara a, anyị niile nwere oke n'ọrụ ahụ ịghara itinye aka na ọrụ ọ bụla nke na-emebi ọganihu anyị meworo iji meziwanye ndụ ndị mmadụ, n'agbanyeghị agbanyeghị echiche anyị nwere ike ịdị iche n'oge ọ bụla.
Ihe mmebi anabataghị gọọmentị na nkeonwe nke ndị looters mere ugbu a abanyela ijeri Emalangeni, na-ebute oke mbibi na mmepe mmekọrịta ọha na eze na akụ na ụba obodo. Atụmatụ a na-eme ugbu a na-ekpughe na ọnụ ahịa nke mmebi na-eguzo n'ihe dị ka ijeri E3, na ọrụ 5 000 furu efu ma na-agụta. Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) adọtaghị ndị looters a, ebe ihe dịka obere azụmaahịa 1 000 metụtara.
Nke a na-abịa mgbe mba anyị na ụwa na-etinye atụmatụ dị ukwuu iji gbanye ọrụ ọrụ ma na-akpali akụnụba anyị n'ụzọ nke uto na-adigide. 3
Ime ihe ike a na-enwetụbeghị ụdị ya dakwasịrị ngalaba ahụike anyị dịka, n'etiti ndị ọzọ, ụgbọ ala ahụike isii, gụnyere ambulances, bibiri; ufodu n’ime ha di ohuru.
Ndị a gụnyere ụgbọ ala COVID-19 pụrụ iche maka usoro nyocha kọntaktị na ibufe COVID-19 n'omume na mpaghara Shiselweni. Werelọ ọrụ Ahụike Nhlangano mpaghara gbara ọkụ. A wakporo ụgbọ ihe mberede ọzọ na mpaghara Lubombo na-etinye ndụ ndị ọrịa nọ n'ụgbọ egwu. Nke a gafere ebe 10 Tinkhundla nke ndị looters na ndị ọgba aghara ahụ mebiri.
Ọnọdụ ọjọọ a emetụtala nzaghachi anyị COVID-19 n'ọtụtụ ụzọ, mana anyị kpebisiri ike na enweghị ntụkwasị obi n'ọchịchọ anyị inye ọrụ ahụike na emaSwati niile. Anyị na-adịghị agbanwe agbanwe n'ọchịchọ anyị ka anyị wee rụọ ọrụ nke ọma na mba ahụ.
Gọọmentị nwere obi ụtọ ịmara na ọnọdụ dị n’ala ahụ kwụsiri ike n’ime ụbọchị ole na ole gara aga, ebe ndị ọrụ nche anyị ejiriwo obi ike hụ na e mere ka udo na usoro dịrị n’ofe mpaghara anọ nke mba ahụ. Ndị agha anyị ga-anọ na nche mgbe niile iji hụ na nchekwa ọha na eze, azụmahịa na ihe ndị ọzọ.
Ya mere, anyị na-agba emaSwati niile ume ka ọ nọgide na-akwọ akụ na ụba anyị site na ịlaghachi ọrụ ma mepee azụmaahịa niile emetụtaghị. Ekwesịrị ime nke a na nrube isi nke iwu COVID-19. Oge a ga-alọta bido n'elekere isii nke ụtụtụ ruo elekere ise nke ụtụtụ ma ọfịs ga-aga n'ihu na-emechi n'elekere 6:5 nke ehihie iji nye ndị ọrụ ohere ịbịa n'ụlọ n'udo n'oge mgbochi.
N'oge a, achọrọ m ichetara emaSwati na anyị ka na-eche ọnọdụ na-emenye ụjọ, nke nke COVID-19, nke na-aga n'ihu n'ihu na ụbọchị ole na ole gara aga. Anyị na-aga n'ihu na-enwe mmụba n'ọnụ ọgụgụ nke okwu ikpe COVID-19 ọhụrụ na mba ahụ site na 96 ikpe n'etiti 13-19 June, 207 ikpe n'oge izu nke 20-26 June, na 242 n'izu 27 June ruo 3 July 2021. 5
Generalzọ ikpe ọhụụ nke ikpe ọhụụ na-egosi omume na-aga n'ihu na nnwale nnwale ahụ arịgoro site na 3% ruo 9% dịka nke ụnyaahụ. A kọọrọ ọnwụ atọ metụtara COVID-19 n'ime izu gara aga mgbe ọ kọchara otu ikpe n'ime izu gara aga.
Ọ bụ ezie na ọnụọgụ ebe obibi anyị na ebe dị iche iche anyị ka nọ na 9% dị ala, ịrị elu nke ọnụ ọgụgụ bụ ihe doro anya na-egosi na mba ahụ nọ na mmalite mmalite nke agba nke atọ. Atụmatụ ndị ahụ na-egosi na a ga-enwe mmụba na-aga n'ihu na ikpe ọhụrụ maka izu 4 na 6 na-esote tupu ọnụ ọgụgụ dị elu. Anyị maara na ịrị elu n'okwu ọhụụ na - eduga na mmụba n'ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ n'ime oge izu abụọ.
Ọzọkwa, ana m arịọ ndị niile emaSwati ka ha mụrụ anya ma na-agbaso usoro iwu COVID-19 na usoro ahụike. Ka ọ dị ugbu a, Gọọmentị na-aga n'ihu na-ewepụtakwu ọgwụ mgbochi COVID-19 maka emaSwati iji mee ka mmega ahụ mgbochi anyị sie ike.
N'ime ngwụsị izu, anyị natara ọgwụ 12 000 ọzọ nke ọgwụ mgbochi Oxford-AstraZeneca. Ndị a doses 6
ga - enyere anyị aka ịnọgide na - enye ndị ọrụ ahụike anyị ọgwụ nke abụọ ka anyị na - agagharị na usoro ndị ọzọ nke usoro ịgba ọgwụ mgbochi. Ministri Ahụike ga-enye mmelite ogwu dị mkpa.
Ka anyị na-enwetakwu ihe ọmụma banyere mgbasa nke ụdị Delta dị iche iche nke nje COVID-19 na mba ndị agbata obi ya, ka anyị mee ka mba ahụ matawanye ohere nke nje a na-efegharị na mba ahụ n'ihi ngagharị nke ndị mmadụ site n'otu mba gaa n'ọzọ ? N'akụkụ a, anyị na-arịọ Mba ahụ ka ọ gaa n'ihu na-agbaso usoro iwu COVID-19 nke gọọmentị guzobere dị ka ihe iji belata mmetụta nke ọrịa a na-emetụta ndị mmadụ.
1. Yiri nkpuchi ihu gị ma kpuchie imi na ọnụ gị;
2. Na-akwọ aka gị ma ọ bụ na-edozi ahụ mgbe niile;
3. Zere ìgwè mmadụ na oghere ndị dịpụrụ adịpụ na obere ikuku ma ọ bụ ikuku ikuku;
Ka anyị chebe onwe anyị pụọ na COVID-19 ma chekwaa ndị ọrụ nlekọta ahụike anyị.
Udo nke udo na 10 nke July 12.00PM
United Nations na New York #JusticeforThabani #EswatiniProtests #TiniTwitter #eswatini #swaziland #FreeSwaziland #Democracynow #Kungahlwakwenile #ihechi ndi ozo # DemocracySwaziland #prayforeswatini #SwaziLivesMatter pic.twitter.com/XTxWe5v51z
- #SwaziLivesMatter (@ swazilivesmatt1) July 5, 2021
N'agbanyeghị oke nsogbu kpatara usoro ahụike anyị site na ịkwakọrọ ihe na nso nso a, anyị agaghị akwụsị inyere emaSwati aka imeri agha a megide ọrịa ahụ. Anyị ga-eme ihe niile anyị nwere ike ime iji zie ndị mmadụ ozi ọma.
Ibughachi ebe obibi ndi oru ulo
Na ederede ọzọ, anyị ga-achọ ịkwado Mba ahụ na Centlọ Ọrụ Ije Ozi nke Mba niile ga-arụ ọrụ site na echi, ewezuga Manzini, Hluthi, Hlatsi, na Siphofaneni.
Ndebanye aha ụlọ ọrụ na akwụkwọ ikike ikikere ụgbọ ala
Gọọmentị makwaara na emegharịrị akwụkwọ ikikere ndebanye aha ụlọ ọrụ na ndebanye aha ụlọ ọrụ na ọgba aghara n'oge ọgba aghara na nso nso a. Ya mere, anyị na-agwa Mba ahụ na mmegharị nke ikikere ụgbọ ala abataala na 20 July 2021. E tinyela mmegharị ndebanye aha ụlọ ọrụ ruo 31 August 2021.
Gọọmentị ga-achọ ịkwado emaSwati, ndị mba ụwa, ndị mmekọ mba, na ndị bi na Eswatini na anyị ga-eme ihe niile dị mkpa iji hụ na nchekwa ọha na eze ka ndụ na-alaghachi na nkịtị.
Enwere m ike ime ka ọha na eze kwụsị ịzụ ụjọ ma nye mmesi obi ike na anyị na-emegharị ihe niile iji hụ na ezuru ụlọ ahịa anyị n'oge niile.
Anyị na-anọgide na-adabere na emaSwati iji mee ihe ziri ezi ma na-eche nche megide ihe ọ bụla si mba ọzọ pụtara imebi obodo anyị ma yie mmekọrịta anyị egwu.
Anyị nwere otu mba ma ọ dịịrị anyị niile ichekwa ya ma chekwaa ihe anyị jiri mara ya kemgbe ọtụtụ narị afọ - nke ahụ bụ udo na nkwụsi ike anyị.
Onye na-arụ ọrụ Mịnịsta Ala